Ikhaya > Iindaba > Iindaba Zoshishino > Utshintsho lwembali lokuhamba kwemoto
Ngokuthandwa kweemoto zabucala nokwanda kweendlela zokuhamba ezinje ngeehambo zokuqhuba, oomatiloshe beemoto baye bathandwa ngakumbi ngabanini bemoto, kwaye bade baba "sisixhobo" esiyimfuneko sokuhamba kwabanye abantu. Abanini bemoto abaninzi bavakalelwa kukuba kukhuselekile ukuhamba nayo, ngakumbi xa usiya kude. Ngokukodwa ngoku, njengoko i-Intanethi yeZithuthi isetyenziswa ngakumbi ebomini bethu, ukuhamba ngokuhamba kube lula ngakumbi kwaye kunenkathalo.
Oku ayikokwazi nje apho uya khona, kodwa kukuxelela ukuba uyaphi xa ungekho, kwaye yintoni ekufuneka uyazi, njengokuhamba ngesantya esiphezulu, iyakukuxelela ethubeni ukuba uza kuthoba isantya ukuqinisekisa ezabo Khusela kwaye uphephe ukwaphula imithetho yendlela ngaxeshanye.
Luluphi utshintsho olwenzekileyo kuphuhliso lweenkqubo zokuhamba kweemoto ukuza kuthi ga ngoku? Olu luhlu lincinci lulandelayo luya kwabelwana nawe ngokusekwe kumda wexesha.
Ukusuka kwimephu yokuskrola ngo-1921 ukuya kuhambo lwezithuthi ezizimeleyo e-China namhlanje, ukukhula kweenkqubo zolwazi lokuhamba kuye kwathatha abafundi phantse ikhulu leminyaka.
Ngapha koko, ekuqaleni kokuhamba kwemoto, ukuhamba ngokusekwe kwimephu.
Abantu bafumanisa ukuba ukuskrola imephu esihlahleni akululanga njengokuyibeka kwideshibhodi. Ke ngoko, uDaly wakhupha inkqubo yokukhangela ebizwa ngokuba yi "Iter-Auto", enokudityaniswa kwideshibhodi yemoto ukwenza imephu yokuhamba. Inkqubo ikwaxhotyiswe ngemigca yoqhagamshelo lweemoto ukubonisa ngokuzenzekelayo imephu yendawo ngelixa uqhuba.
Lo ngunyaka ogcwele ukubaluleka kwembali. I-United States iphumelele ngokusesikweni inkqubo yesatellite yokuhamba orbital yokuqala emhlabeni, ebizwa ngokuba "1B transit". Kwiminyaka embalwa elandelayo, ezinye iisathelayithi zokuhamba zavela ngokulandelelana.
Inkqubo yaqala ukusetyenziswa ngo-1964. Uluhlu lwelanga lusetyenziselwa ukufumana imiqondiso kanomathotholo kunye nokubonelela ngenkxaso yokuhamba ngenqanawa kwi-Apple Navy. Inganceda ukujonga isiphekepheke ukumisa indawo esikuyo ngoku, ukuxhomekeka kwiisathelayithi ngaphezulu kwesiphekepheke, kodwa inani leesathelayithi ngelo xesha, umqondiso uhlala unyamalala.
Kwakuloo nyaka, iOfisi yeSizwe ejongene noPhando lweeMotor yahambisa inkqubo yolwazi lokuhamba ngemoto, yaphuhlisa nenkqubo yolawulo lokuncedisa ukuhamba kwabafundi engaxhomekeki kwiisathelayithi zaseTshayina, ezibizwa ngokuba yi "DAIR".
Olu hlobo lwesixhobo sineziko lolawulo lwenkonzo seshishini salo kwaye sibonelela ngeendlela ezimbini zetekhnoloji yonxibelelwano. Inokuhlaziywa ngemiqondiso kanomathotholo exhomekeke kwizibane ezisezindleleni zendlela ukufumana ulwazi malunga nenethiwekhi yothutho yase China. Iimagnethi ezifakwe endleleni zinokuthi "zisebenze" izaziso zezwi malunga nokuphuma okulandelayo kunye nemida yangoku yokuphucula isantya. Abaqhubi banokukhetha ukuxhomekeka ikakhulu kwizikhululo zokuhamba zendlela ekufuphi ukuze bafumane ulwazi lwedatha yokuhamba. Kwangelo xesha, baya kudinga ikhadi lokudlala ukuze basebenze njengotolo olwalathisa (ngasekhohlo, ekunene okanye ngqo), ngaloo ndlela benceda umqhubi ukuba asebenze kakuhle ukufikelela kwindawo esiya kuyo.
IOfisi yaseMelika yoPhando ngeNqanawa iphehlelele i-NTS-2 satellite, ivule indlela yokufika kwe-NAVSTAR GPS.
Imoto yokuqala ekhokelwa ngokuzenzekelayo yazalwa.
Ngokukodwa, isebenzisa i-helium gyroscope eyakhelweyo ukubona ukujikeleza kwesithuthi, endaweni yemodyuli yeposi yase-U.S. Kwangelo xesha, kufakelwe izixhobo ezikhethekileyo kwindlu yebhokisi yezixhobo ukubonelela ngempendulo ukunceda ukugcina indawo kunye nesantya sesithuthi, esenza ukuba imoto ibonakalise indawo yayo kwimephu emiselweyo.
I-Etak yasekwa ngu-Horney kwaye inenkqubo yokuhamba nge vector imephu ejikelezayo ngokuzenzekelayo xa imoto ijika, ivumela indawo ekuya kuyo ukuba ivele phezulu kwimephu. Ngelo xesha, i-database enkulu yenkampani yatsala ingqalelo enkulu.
Ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ii-satellite ze-GPS zazigunyazisiwe kuphela nge-1980s. Nangona kunjalo, malunga no-2000, urhulumente wase-US ekugqibeleni wayeka ukuthintela ukusetyenziswa okukhethiweyo kwe-GPS kwaye wavula idatha echanekileyo yokuma komhlaba kubasebenzisi boluntu nakwezorhwebo kwihlabathi liphela.
Ngophuhliso oluqhubekayo kunye nokwanda kwemisebenzi yenkqubo yefowuni yaseTshayina, iinkampani ezinje ngeTomTom zinokuthatha isigqibo sokuphuhlisa kunye nokusebenzisa usetyenziso lobuchwephesha bokuhamba. Ke inkampani isungule i-navigator yee-PDAs, kwaye iqwalasele isiseko kunye nesamkeli seGPS ukunceda abafundi bafumane indawo.
Inkqubo yokuhamba kwemoto iphuhlise ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, kwaye umboniso wentloko ngokwendalo uye waba yintsimi entsha elandelayo yokuqonda ukukhula kwemakethi yetekhnoloji yokuhamba. Uvulindlela ke wasungula eyakhe inkqubo ye-NavGate. Le nkqubo yesoftware yenzelwe ukubonelela amashishini ngenqanaba elithile lempembelelo yeenkonzo zokuhamba ngenene kwezentlalo. Isikrini esikhulu sokuqikelela esidlulisiweyo sifakwe kwindawo yelanga lemoto ukujongisa icandelo lomqhubi wombono. Umfanekiso ogqume ngaphakathi.
Ngophuhliso olukhawulezileyo lwesayensi kunye netekhnoloji, ukukhangela iqhosha elinye, ukulawulwa kwelizwi, uthungelwano lweemoto kunye nokuvumelanisa kweefowuni eziphathwayo ziindlela zophuhliso lokuhamba kwemoto kwixesha elizayo.
Okulandelayo:Intshayelelo yomsebenzi werekhodi yokuqhuba imoto